Monday July 09, 2018 - 11:22:50 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Turkiga ayaa sheegaya in xalay fiidki uu jidka ka baxay Tareen siday dad gaaraya 360 qof ayna ku dhinteen 24 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 124 kale.
R/wasaare Ku xigeenka wadanka Turkiga oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in howllihi Badbaadinta ay soo dhamaadeen, tirakoobna ay ku sameeyeen dadki saarna Tareenka ka hor intii uusan rogman, hadana tirada dhimashada ay tahay 24, dhaawacana uu yahay 124 qof oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad u liidato.
Tareenka ayaa ku rogmaday gobolka Takirdag ee dhaca woqooyi galbeed wadanka Turkiga, waxa uuna kusii jeeday Magaalada Istanbuul oo ah caasimada labaad ee wadanka Turkigaxiliga uu jidka ka baxayay.
Muuqaala lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinayay burbur lixaad leh oo soo gaaray illaa lix qeyb katirsan Tareenka kuwaas oo hareer yaala wadadii uu kusocdaalayey, meydad iyo dhaawacyo badan oo daadsan goob aan sida kaga fogeyn goobtii uu ku rogmaday.
Kooxaha gurmadka degdega oo isticmaalaya gaadiidka Ambalaaska iyo diyaarado Helicoptero ah ayaa gaaray goobta si ay gurmad caafimaad ugu fidiyaan dadka dhaawacyada qaba eek a badbaaday shilkan, waxa ayna sheegeen in ilaa hada ay diiwaan galiyeen dhimashada 24 qof iyo dhaawacyada 124 kale oo kamid aha dadki tarenka saarna.
Wasaarada gaadiidka Turkiga ayaa war ay soo saartay ku sheegtay, suurta galnimada in Tareenka uu u rogmada roobab xoogan ooo halkaa ka da,aya oo saameyn ku yeeshay jidka gaarka ah ee Tareenada ay isticmaalaan.
Sidoo kale Madaxweynaha dalka Turkiga RaJeb Tayyib Erdogan ayaa ku baaqay in baaritaan dhameystiran lagu sameeyo dhacdadan oo uu ku sheegay inay tahay mid xanuun badan.
Burburka tareenkan ayaa kusoo aadaya xilli manta oo isniin ah lagu wado in Rajab Tayib erdogan mar kale loo caleema saaro xilka madaxtinimada dalka turkiga kadib guushii uu ka gaaray doorashadii wadankaas ka dhacay dhamaadki bishii aanu soo dhaafay.